လက်မ ၅၀ ကျော်သောတီဗွီများ၊ မည်သည့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။ | Gadget သတင်း
လက်မ ၅၀ ကျော်သောတီဗီများ၊ ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးရမလဲ။
သင်၏အိမ်တွင်းရုပ်မြင်သံကြားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စက်ဟောင်းအဟောင်းကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးရန်စဉ်းစားနေပါသလား။ ဘရိုရှာနှင့်အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များကိုသင်ကြည့်ပြီးပြီ၊ မည်သည့်မော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုသင်မသိပါ။ Brady People in ည့်ခန်းမှာ big ည့်ခန်းကျယ်နေလား။ ထိုအခါ မင်းလိုချင်တာကအနည်းဆုံးလက်မ ၅၀ ရှိတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုပေါ့ဒီပုံဟာပုံပေါ်ပုံရနေတဲ့ပုံတွေထဲကတစ်ခုကခင်ဗျားအပေါ်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်တော့မှမကြုံဖူးဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့စီးရီးတွေကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ လက်မ ၅၀ ခန့်ရှိရုပ်မြင်သံကြားများ၏ထောက်ပံ့မှုကိုရရှိသည် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ထို့ထက် ပို၍ တကယ်ကွဲပြားခြားနားသည်ဒါကြောင့်သင်ကအမှတ်တံဆိပ်များ၊ မော်ဒယ်များ၊ လေ့လာရန်စျေးနှုန်း၊ ထိုကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှု၏အနှုတ်လက္ခဏာအပိုင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အရူး လုပ်၍ ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်တစ်ပုံစံတည်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခု၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမမှတ်မိနိုင်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့အတွက် Gadget သတင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလက်တစ်ဖက် ပေး၍ အဆိုပြုချက်တစ်ခုအားဖြင့်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေလိုသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှိုင်းယှဉ် သင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ၅၀ လက်မသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။ ငါတို့နှင့်အတူလိုက်နိုင်မလား?
2 Panasonic က VIERA TX-50DX780E
4 LG က 55EC930V
5 Sony က KD-49X8308C
6 Philips မှ 50PUH6400
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဒီနဲ့စတင်ပါစို့ Samsung UE50KU6000နှင့်အတူအံ့သြဖွယ်တီဗီ ၅၀ လက်မ 50K UHD မျက်နှာပြင်ပါဝင်သည် ဘက်ပေါင်းစုံစပီကာ, USB 2.0 port နှစ်ခု ဒါကြောင့်သင်ကချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးအပြည့်အဝတစ် pendrive တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drive ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် Ethernet, မှတ်တမ်းတင် function ကိုနှောင့်နှေး,3HDMI port များ အခြား TV များကဲ့သို့ BluRay player၊ Apple TV သို့မဟုတ် Chromecast ကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်၊ စမတ်တီဗီ Tizen လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်စွမ်းအင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ VESA mounting system နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုနံရံပေါ်တွင်အလွယ်တကူချိတ်ဆွဲနိုင်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်း၏အဓိကအားသာချက်များကိုအလွန်ပါဝင်သည် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းသောပုံရိပ်အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည့်ရှုထောင့်ဖြင့်သင့် ဦး ခေါင်းကိုအပူချိန်ညှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်တစ် ဦး ရှိပါတယ် အသံအရည်အသွေးကောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းဆက်သွယ်မှုကောင်းများစွာရှိသည် အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမေ့ခြင်းမရှိဘဲ ပေါင်းစည်းထားသောတီဗီ သင်အလွန်လေးလံသောဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်ကိုသုံးခြင်းနှင့် YouTube, Netflix စသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုခံစားနိုင်သည်။
Panasonic က VIERA TX-50DX780E
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရုပ်မြင်သံကြားစက်ဖြင့်သမိုင်းနှင့်လူသိအများဆုံးနည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှအခြားတစ်ခုကိုခုန်ကူးလိုက်ကြသည် Panasonic က VIERA TX-50DX780E နှင့် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် ထောင့်ဖြတ်အတွက် Ultra HD (3840 x 2160 pixels 3D နှင့် Smart TV များပါ ၀ င်သည် ဘက်ပေါင်းစုံ။
Panasonic VIERA TX-50DX780E ရုပ်မြင်သံကြားသည်အလွန်လှပသောဒီဇိုင်းရှိပြီးသူ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ ဘက်ပေါင်းစုံစပီကာနှစ်ခုဆက်သွယ်မှု ဘလူးတုသ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှတ်မှု၊ USB 2.0 port နှစ်ခုနှင့် USB 3.0 port တစ်ခု, စွမ်းအင်လက်မှတ် A, ဆက်သွယ်မှု Ethernet, VESA သည်စနစ်လိုက်ဖက်မှု၊ အသံအမျိုးမျိုး၊ စမတ်ရုပ်ပုံအမျိုးမျိုး၊ သုံး HDMI ဆိပ်ကမ်းများ, စမတ်တီဗီ OS operating system နဲ့အတူ၊ ဝိုင်ဖိုင်စသည်တို့
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်ပြည့်စုံသော ၅၀ လက်မရုပ်မြင်သံကြားဖြစ်သည် အဓိကအားသာချက်များ အသံအရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များကိုထောက်ပြနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Panasonic နှင့်တူညီသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူတူနေသော်လည်းအခြားပုံစံတစ်မျိုး (သတိပြုရန်မှာသတိပြုရန်မှာ nomenclature သည်ယခင်စာလုံးနှင့်စာတစ်လုံးတည်းသာကွဲပြားသောကြောင့်) ဒါအကြောင်းပါ Panasonic TX-50EX780Eနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား ၅၀ လက်မ UHD မျက်နှာပြင် (3840 x 2160 pixels 4K HDR 3D သင်နှင့်အတူစစ်မှန်သောရုပ်ရှင်ရုံအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သော်လည်း the ည့်ခန်းမှထွက်ခွာရန်မလိုပါ။
ဒီစိတ်ကူးယဉ်တီဗီမှာထိပ်တန်း -of-the- အကွာအဝေး features တွေရှိပါတယ် USB 2.0 port နှစ်ခုနှင့် USB 3.0 port တစ်ခု၊ ဒီဂျစ်တယ်အသံထွက်ပေါက်၊ နားကြပ်ပေါက်၊ လေး HDMI ဆိပ်ကမ်းများhard disk သို့မဟုတ် pendrive တွင်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း ဘလူးတုသ် စွမ်းအင်အသိအမှတ်ပြု A၊ VESA mounting system နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ ပါဝါတစ်ခုချင်းစီ၏ 10W နှင့်အတူပေါင်းစည်းစပီကာနှစ်ခု, Netflix နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူစမတ်တီဗွီ "My Home Screen 2.0" နှင့်ပိုမိုသောအရာများ။ တစ် ဦး မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ အားလုံးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်စွမ်းစောင်းနှင့်ရုတ်သိမ်းဒီဇိုင်း,
၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကအားသာချက်များအနက်ယခင်မော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးစွမ်းအင်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည် ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်အရည်အသွေးသည်ကြည့်ရှုထောင့်ကျယ်ဖြင့်ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာများကိုတကယ်ကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြသည်။ တစ် ဦး မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ အားလုံးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်စွမ်းစောင်းနှင့်ရုတ်သိမ်းဒီဇိုင်း.
LG က 55EC930V
ဒီတီဗီအကြောင်းပြောဖို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေပြောင်းလိုက်တာနဲ့ငါတို့အရွယ်သေးသေးလေးတစ်ခုယူသွားမှာပါ LG က 55EC930V ဒါကသာမန်ထဲကအသံနဲ့ဗွီဒီယိုအတွေ့အကြုံကိုပေးတယ်။
အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါတို့ဟာaရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ် ကွေးမျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်အတူ 55 Full HD (၁၉၂၀ x ၁၀၈၀)၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခုမြင်တွေ့ခဲ့သည့်မော်ဒယ်များထက်နည်းနည်းမြင့်သည် OLED ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ပိုမိုတိကျသောအရိပ်များ၊ သန့်ရှင်းသောလူမည်းများနှင့်ပိုမိုတောက်ပ။ နက်ရှိုင်းသောအရောင်များနှင့်အတူခံစားနိုင်လိမ့်မည်။ 3D နည်းပညာ.
ဒီဇိုင်းအလွန်ပါးလွှာပြီးပါဝင်သည့်ဒီဇိုင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ စမတ်တီဗီ function ကို Netfix, Wuaki TV, YouTube နှင့်အခြားများစွာတို့ကဲ့သို့သင်၏အင်တာနက်ပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်၏ TV ပေါ်တွင် application များစွာကိုတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုမည့် webOS operating system နှင့်အတူ။
အခြားမှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များမှာတည်ရှိသည် လေး HDMI ဆိပ်ကမ်းများ, သုံး USB 2.0 ဆက်သွယ်မှု, AV ထည့်သွင်းမှု၊ pendrive (သို့) ပြင်ပ hard disk တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု၊ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု၊ 10W ပါဝါ ၁၀ ခုပါ ၀ င်သောစပီကာနှစ်ခုစသည်တို့ပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာ ကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေး OLED နည်းပညာ၏တစ် ဦး မှဆက်ပြောသည် သာ။ ကြီးမြတ်စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံ ကွေးမျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်း featuring နှင့် များစွာသောနှင့်မတူညီဆက်သွယ်မှု options များ.
Sony က KD-49X8308C
ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကနေပုံရိပ်နဲ့အသံ၊ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေထွက်ရာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်။ ငါဆိုနီနှင့်ဒီတီဗွီကိုဆိုလိုတာ Sony က KD-49X8308C ၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်တစ်ခါမျှမခံစားဖူးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများကိုခံစားနိုင်သည် ၅၀ လက်မ Ultra HD 50K LCD မျက်နှာပြင် (၁၈ x ၂၄) ၎င်းသည်ထူးခြားသောအမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုပေးသည့် IPS နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားသည် သဘာဝအရောင်များနှင့်အကြီးအပြတ်သားMotionflow နည်းပညာကြောင့်ဂရုတစိုက်မရှိသောနှင့် / သို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောပုံရိပ်များနှင့်ပင်ပေါင်းစည်းထားနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကောင်းတဲ့ထွက်ချန်မထားနိုင်ပါ ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်း, Sony ၏ပုံမှန်ကဲ့သို့အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးကိုချောနှင့်အတူ။ ဒါ့အပြင်ဖြစ်ခြင်း VESA mounting system နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားကိုနံရံပေါ်တင်ပြီး ပို၍ ပင်ရုပ်ရှင်ရုံအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။
အသံအရကြည့်လျှင်၎င်းတွင်အားကောင်းသော Bass Reflex စပီကာရှိသည် အသံအရည်အသွေးကောင်း။ အခြားကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်လိုပါက Sony KD-49X8308C တွင်ပြproblemနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ USB port သုံးခု y လေး HDMI ဆိပ်ကမ်းများ.
Philips မှ 50PUH6400
ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်စရာငါးခုကိုတွေ့မြင်ပြီးပါပြီ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Philips 50PUH6400 ရုပ်မြင်သံကြားကိုပေါင်းစပ်ထားသော Smart TV ပါ ၀ င်ပြီးအလွန်ဂရုစိုက်။ လှပပြီးကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ဘေးဘောင်များ၏ဒီဇိုင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည့်ခြေထောက်ရှိပြီး၎င်းသည်လိုက်ဖက်သော VESA mounting စနစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးစီးရီးများသို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောထိုဂိမ်းကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်သည်။
Philips ၏ 50PUH6400 Smart TV တွင် 50″ 4K Ultra HD LED မျက်နှာပြင် နည်းပညာများပါ ၀ င်သောကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုပေးသည် Micro Dimming Pro ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ living ည့်ခန်းသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းအတွင်းရှိအလင်းပမာဏပေါ် မူတည်၍ မျက်နှာပြင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြင်ဆင်နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် သဘာဝလှုပ်ရှားမှုရွေ့လျားနေသောပုံရိပ်များကိုပုံသဏ္ဌာန်မရှိသောပုံသဏ္withာန်မရှိဘဲမြင်နိုင်ရန်အတွက်ပြတ်သားမှုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ကိုတိုးစေသည်။ အကယ်၍ ဒီအရာအားလုံးဟာမင်းအတွက်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ရင်နည်းပညာ Pixel Plus Ultra HD ပိုပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ပြင်းထန်သောအရောင်များကိုပေးစွမ်းသည်။
ဒီထိပ်တန်းရုပ်ပုံအရည်အသွေးအပြင်တီဗီပါ ၀ င်သည် USB port သုံးခု y လေး HDMI ဆိပ်ကမ်းများ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဆက်သွယ်နိုင်အောင်၊ ထို့အပြင်ရှိပါတယ် ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှု, အက်ပ်များအတွက်သိုလှောင်မှု 8GB၊ Android တီဗွီ စမတ်တီဗီလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်ပိုပြီး။ အာ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံထားရသည့် A ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သတ်၍ တာ ၀ န်ရှိပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားခကိုပေးဆောင်ရန်သင့်အားကြောက်ရွံ့မည်မဟုတ်ပါ။
ပြီးတော့ကျနော်တို့စတင်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဒီ Samsung UE49KS7000 TV တို့အတူအဆုံးသတ်သွားတယ် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် (ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခုမြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာနှင့်အနည်းငယ်နည်းသည်၊ သို့သော်ဟဟားဟားမှာလည်းတိုက်ပွဲများအတွက်မေးခွန်းမဟုတ်ပါ) Ultra HD 4K HDR LCD အစွန်းထွက်အလင်းရောင်နှင့် HDMI port လေးခုနှင့်အဆက်အသွယ်တန်ချိန်များစွာပါ ၀ င်သည် SmartTV.
ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းဒီတီဗီ၏မီးမောင်းထိုးပြကတစ်ကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ထိပ်တန်းရုပ်ပုံနှင့်အသံအရည်အသွေးသို့မဟုတ်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များမှအခြားမော်ဒယ်များထက် ပို၍ တူညီပြီးတခါတရံပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်း၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အစမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၊ ဒီစာရင်းဟာလက်ရှိစျေးကွက်မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ ၅၀″ ဒါမှမဟုတ်ထိုထက်မကတဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားတွေနဲ့အဆိုပြုချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ Panasonic TX-50CX50 ကဲ့သို့သောအခြားဥပမာများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဥပမာပေးနိုင်သည် Samsung UE55JU6400 နှင့်အခြားများစွာတို့ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အဆိုပြုချက်ကဘာလဲ? အိမ်မှာသင့်ရုပ်မြင်သံကြားကိုမကြာသေးခင်ကမှပြုပြင်ပြီးပြီလား သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံတစ်ခုကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ ၎င်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရုပ်မြင်သံကြားကိုရှာဖွေနေသည့်အခြားစာဖတ်သူများအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » တီဗီများ » လက်မ ၅၀ ကျော်သောတီဗီများ၊ ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးရမလဲ။